Toni Kroos oo ka hadlay waxa uu diirada saari doono xulkiisa Germany koobka aduunka 2018 - Wargane News
Home Sports Toni Kroos oo ka hadlay waxa uu diirada saari doono xulkiisa Germany...
Khadka dhexe kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Germany ee Toni Kroos ayaa wuxuu xqiijiyay in xulkiisu uu diirada saari doono in ay gaaraan finalka koobka aduunka ee 2018.
Xulka qaranka Germany ayaa wuxuu qeyb ka yahay Group H ay ku wada jiraan xulalka Mexico, South Korea iyo Switzerland.
Toni Kroos ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id wuxuuna kaga hadlay waxa uu xiigsanayo xulka Germany sanadka koobka aduunka kadib markii ay kusoo guuleysteen kii ugu dambeeyay ee sanadii 2014-kii ka dhacay dalka Brazil.
“Waxaan rajeenayaa in xulal badan ee waaweyn ay hormar weyn sameeyeen, marka lala barbar dhigo sanadii 2014, sida xulalka France, Brazil iyo Spain, sidaas daraadeed waa inaan taxadir qabnaa”.
Khadka dhexe kooxda Real Madrid ayaa sidoo kale sheegay in xulkiisa qaranka Germany uu difaacan doono koobka aduunka si ay ugu guuleystaan markii labaad ee xiriir ah.
“Waxaa muhiim ah in aan ku qasabno xulalka kale in aysan raboonin in ay naga hor yimaadaan, hadii aan sidaas sameyno waxaan yeelan doonaa gacanta sare, waxaana ka guuleysan doonaa xulalka ugu fiican”.
Somaliland: Gaadhi Ay Saarnaayeen Qaar Ka Mid Ah Fanaaniinta Xidigaha Geesku Oo Qalibmey